तस्वीर सौजन्य : अन्नपूर्ण पोस्ट
६० वर्षमुनिका व्यक्ति बढी संक्रमित भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. सुरेश तिवारीको भनाइ छ। ‘यो उमेरका व्यक्तिहरू धेरै चलायमान हुन्छन्। त्यसैले बढी संक्रमित भएका छन्’, डा. तिवारीले भने, ‘युवा उमेरसमूहमा बढी संक्रमित भेटिए भन्दैमा ६० वर्षमाथिको समूह जोखिममा परेको छैन भन्न मिल्दैन। संक्रमण युवा समूहमा बढी देखिए पनि मृत्युदर वृद्धवृद्धामा बढी छ।’
११ देखि २० वर्ष उमेरमा संक्रमण १५.४ प्रतिशत छ। ६१ देखि ७० वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिक १.५ प्रतिशत संक्रमित छन्। त्यस्तै ७१ वर्षभन्दा माथिका संक्रमित एक प्रतिशतभन्दा पनि न्यून छन्। डा. तिवारीका अनुसार चलायमान समूहमा संक्रमण देखिनुले आगामी अवस्था गम्भीर रहेको संकेत गर्छ। यही समूहले घरमा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई संक्रमण सार्ने जोखिम हुन्छ।
युवामा कोरोना संक्रमण भए पनि सञ्चो भइहाल्छ भन्ने सोच हावी देखिएको डा. प्याकुरेलको भनाइ छ। ‘लकडाउन उल्लंघन गर्ने, पास दुरुपयोग गर्ने, सुरक्षात्मक मापदण्ड प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति छ’, उनले भने, ‘लक्षण पनि देखिएको छैन भने आफू संक्रमित भएको थाहै पाउँदैनन्। झन् धेरैलाई कोरोना भाइरस सार्ने जोखिम हुन्छ।’
डा. गौतमले पहिलो चरणमा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिमा संक्रमण बढी देखिएको सुनाए। ‘पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि स्थानीयस्तरमा संक्रमण देखिन थालेको छ’, उनले भने। काठमाडौं उपत्यकामा केही दिनदेखि संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। शुक्रबार १ सय ६ जना संक्रमित थपिएका छन्। साउन पहिलो सातापछि काठमाडौं उपत्यकामा लक्षणसहितका संक्रमित फेला परेका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो साता लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा दिनेश गौतमले खबर लेखेका छन् ।
बलात्कारको तथ्यांक भयावह : दिनहुँ ७ जना हुन्छन् पीडित
हुक्लाको लिमीमा सशस्त्र पोस्ट स्थापना गर्ने तयारी
विद्यालयमा पठनपाठन गर्दा कोरोनाको जोखिम, शिक्षामन्त्रीले भ्रम छरेको गुनासो
विद्युत् प्राधिकरणले निकाल्यो देशभरका ग्राहकका लागि सूचना ! यस्तो छ जरिवानाको व्यवस्था
किन खाने सिजनका फलफुल ? जान्नुहोस् अम्बाका बेजोड फाइदा